Cadaado: Ergada shirka maamul sameynta oo hoolka ku kala dareeray – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 4 June 2015 5 June 2015
Mareeg.com: Ergada shirka maamul u sameynta gobollada Mudug iyo Galgaduud ee ka socda degmada Cadaado ayaa maanta hoolka shirka ka dareeray, kadib markii muran ka dhashay dastuurka maamulku yeelanayo oo la doonayey in la qeybiyo.
Sida ay ku warramayaan wariyaasha ku sugan Cadaado, kala dareeridda ergada ayaa timid kadib guddiga farsamada maamul u sameynta labada gobol isku dayey inuu qeybiyo qabyo-qoraalka dastuurka la doonayo in maamulkaasi yeesho.
Qaar badan oo ka mid ah ergada shirka ayaa su’aalo kala horyimid guddoomiyaha guddigaas, Xaliimo Yarey, waxaana la sheegay in dugoomiyuhu ku adeysatay in la qeybinayo dastuurka.
Ergada ayaa dhaliyey buuq badan, waxaana lagu sigtay in gacan qaad uu dhaco, hase ahaatee waxaa arrinta soo kala dhexgalay ciidamada Itoobiya ee ka midka ah AMISOM oo amaanka shirka sugayey.
Kulanka ayaa markaas kadib lagu kala dareeray, waxaana qaar ka mid ah ergooyinku ku eedeeyeen gudoomiye Xaliimo Yarey iney dooneyso iney shirka fashiliso.
Ergooyinka ayaa sheegaya iney gudoomiyaha guddiga ka rabeen faahfaahin iyo iney uga jawaabto su’aalo ay weydiin lahaayeen, hase ahaatee ay dhega adeygtay, sida ay leeyihiin.